Isoftware kunye nezixhobo andikwazi kuphila ngaphandle | Martech Zone
Isoftware kunye nezixhobo andikwazi kuphila ngaphandle
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 25, 2009 NgoMvulo, nge-1 kaJanuwari, 2018 Lorraine Ibhola
Kufunda Iposi likaDoug u-Ndenze ukuba ndicinge ngazo zonke izicelo endixhomekeke kuzo njengenxalenye yendlela endiliqhuba ngayo ishishini lam nobomi bam. Iqela, iTungle kunye neDropbox, uDoug sele ekhankanyiwe. Kodwa nolu uluhlu lwabambalwa endingenakubucingela ubomi ngaphandle:
I-WebNotes -Le yeyona nto ibalulekileyo kuphando lwam lwewebhu. Nokuba ndizama ukufumana ulwazi ngeprojekthi yabathengi, inkuthazo yeposti yebhlog, okanye ukulandelela iziphumo zomkhankaso we-PR, iiWebNotes ziyandivumela ukuba ndibambe kwaye ndicwangcise ulwazi ngeposi-amanqaku kunye neziqaqambisi. Kwaye elona candelo lililo sisixhobo sokuvelisa ingxelo. Xa sidibene neAlert kaGoogle ezenzekelayo, kujongeka ngathi sichithe iiyure sikhangela kwiwebhu kwaye silungiselela ingxelo yesishwankathelo!
Idilesi ezimbini Ngaphezulu kwencwadi yedilesi, esi sisixhobo sokwenene seCRM. Ndisebenzise inani leziseko zedatha kule minyaka ukuphatha abafowunelwa bam, ukufikelela (ndizakhele eyam, inkwenkwana yayiyi-geeky), UMTHETHO kunye ne-Outlook kwaye ndiyifumanisa indifanele ngokugqibeleleyo. IWebhu isekwe, ndinokwabelana nabafowunelwa bam neqela lam liphela. Singalawula abafowunelwa kunye neeprojekthi ngokwakhiwa koluhlu lomsebenzi. Kwakhona, ndihamba kancinci ukusuka eConstantContact ukuya kwisixhobo sedilesi ye-imeyile. Nangona isikelwe umda kuyilo kunye nesakhiwo sokunika ingxelo, ndiyabuthanda ubuchule bokubuza isiseko sedatha, ukuchonga iqela elililo, kunye nokuhambisa umyalezo ofanelekileyo.
Ndiyabuthanda ubuchule bokuthumela i-imeyile ngamagama abantu endifuna ukubabandakanya kwisiseko sedatha yam okanye ukwazisa omnye komnye kwaye uyayikhathalela. (Ewe ndiyazi ukuba akangomntu, kodwa ngamanye amaxesha undifezekisa ngakumbi kunomqeshwa wokwenyani, ke kunzima ukuba ungamcingi njengomntu)
nokuzithemba -Abantu abandazi kakuhle bayifumanisa imnandi into yokuba ndifumana imali njengombhali, kuba andingombhali. Ndiyisithethi! Njengesithethi, bendinomdla ngombono wokongeza ii-podcast kuyo yam iblogi kwaye uphicotho-zincwadi lwenze oko kwenzeka. Ngexesha elincinci kakhulu elityalomali, ndiye ndasuka kwi-novice ndaya kolungisa ipro. Andikwazi ukuhlela nokuba kukuncinci um, er okanye umnxeba ukuphazamiseka. (Nangona ngamanye amaxesha ndibashiya bangene, kuba nje bongeza uphawu).
Ndiyayithanda inyani yokuba iipodcast zeveki zinciphisa inani lokubhala ekufuneka ndilenzile, kodwa zikho nezinye izibonelelo ngokunjalo. Iinkqubo zinika isizathu sokumema umhlobo kwiseshoni yokurekhoda notyelelo. Ngoku ndifunde ukuphatha kwitekhnoloji, ukurekhoda kuthatha imizuzu embalwa, emva koko sinexesha lokufumana nokuthetha ngezinye izinto!
Ezi zicelo zintathu bezintsha kum ngo-2009. Kuyamangalisa ukuba ngokukhawuleza iteknoloji entsha iba yinxalenye yobomi bakho. Andikwazi kulinda ukuba ndibone oko ndifumanise kunyaka ozayo!
tags: dilesi ezimbininokuzithembaUjikelezeizixhoboamanqaku ewebhu
Izixhobo kunye neeNkqubo eziNdigcina kuShishino
Ukulahla iSuper Bowl yeDijithali yeMidiya
Ngomhla wama-25 ku-Disemba 2009 ngo-11: 44 AM
Kunika umdla ukubona ukufana phakathi kwethu, uLorraine! Khange ndizame i-IdilesiTwo ngaphandle-kodwa i-CRM inokuba kwixesha elizayo.
Ngomhla wama-25 ku-Disemba 2009 ngo-12: 43 PM
Bathini ngeengqondo ezinkulu?